अर्काले सेवन गरेको चुरोटको धुवाँ कति खतरनाक ? – Upahar Khabar
अर्काले सेवन गरेको चुरोटको धुवाँ कति खतरनाक ?
प्रकाशित मिति : ३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०८:०६ June 12, 2020
विशेषज्ञहरुका अनुसार चुरोटको धुँवा आन्तरिक प्रदूषणको खतरनाक रुप हो । किनभने यसमा ७ हजार बढी रसायन हुन्छ, जसमा ६९ रसायन क्यान्सरको कारण बन्न सकछ । चुरोटको धुँवा पाँच घण्टासम्म हावामा रहन्छ । अनलाइनखबरबाट
Posted in राष्ट्रियTagged churot, Health tips
कोरोना भाइरस: लकडाउनमा तौल बढ्दा कत्तिको चिन्तित हुनुपर्छ?
ओमनस्थित नेपाली दूतावासले सरकारले तोकेको भन्दा २५ हजार सस्तो भाडामा नेपालीहरुलाई पठाउने